Ukuba ngumbuki zindwendwe ku-Airbnb
Zenze zihlale tofotofo uze ufumane ingxelo entle
Izinto ezibalulekileyo eziyimfuneko
Iinkcukacha ezichanekileyo ngendlu
Ukubhalisa ngokulula xa ufika
Yintoni elindelekileyo kubabuki zindwendwe?
Sifuna ukukunika isikhokelo esicacileyo ukuze ukwazi oko kulindelekileyo zize iindwendwe zikunike iinkwenkwezi eziyi-5 ngekhaya lakho.
Sicela bonke ababuki zindwendwe ukuba bafikelele ezi mfuno zine zibalulekileyo: yonke imilinganiselo, izinga lokuphendula, ukurhoxisa kunye nokwamkelwa kokubhukisha. Ukongeza kwizinto ezizicaceleyo, uza kuphinda uhlolwe naziindwendwe ezihlala nawe.
Sowunguye na umbuki zindwendwe? Hlola Inkqubela yakho uze ubone indlela owenza ngayo.
Ukuze iindwendwe zihlale kamnandi, bonke ababuki zindwendwe bamakhaya kufuneka bafikelele kwiimfuno ezine ezibalulekileyo.
Sabela xa zikudinga
Ukuphendula ngokukhawuleza xa iindwendwe zikufuna kubonisa ukuba ungumbuki zindwendwe onenkathalo. Ukuba ukhawuleza kangakanani ukuphendula izicelo zokubhukisha kunye nemibuzo yokubhuka kubonwa kwizinga lokuphendula. Sicela ukuba ababuki zindwendwe bayiphendule imiyalezo elolu hlobo zingaphelanga iiyure eziyi-24.
Yamkela izicelo zokubhukisha
Alukho undwendwe olukuthandayo ukuthumela izicelo eziyi-4 okanye eziyi-5 zokufuna indawo, ngoko silindele ukuba xa ikhalenda yakho ibonisa ukuba indawo yakho iyafumaneka, uzamkele ezininzi izicelo. Qinisekisa ukuba ikhalenda yendlu yakho ibonisa iintsuku okwaziyo ngazo ukwamkela iindwendwe. Ngale ndlela uza kufumana izicelo zokubhukisha onokukwazi ukuzamkela. Ungasebenzisa iisethingi zokufumaneka ukuvala iintsuku phakathi kokubhuka, okanye ezingqubanayo, okanye ukuvala ukuze kungabhukwa kusasele ixesha elide kakhulu ngaphambili.
Kuphephe ukurhoxisa iindwendwe
Sikuthatha nzulu ukurhoxa kwaye sicela bonke ababuki zindwendwe ukuba bakuphephe ukurhoxisa iindwendwe–oko kuphazamisa amalungiselelo azo ohambo! Uza kuhlawuliswa ukuba urhoxisa ukubhuka okuqinisekisiweyo. Sicela ukuba ukuphephe ukurhoxisa ukubhuka okuqinisekisiweyo ngaphandle kokuba kukho iimeko ongenakuzinceda.
Fumana ingxelo entle
Iindwendwe zifuna ukwazi ukuba zinokulindela umgangatho olinganayo nalowo uchaziweyo, nokuba zibhukisha phi. Ekupheleni kwexesha lazo, iindwendwe ziza kubhala ingxelo yokuba bekunjani ukuhlala kwazo, ibe leyo yenye yeendlela esihlola ngazo izinga lakho lokwamkela iindwendwe. Izinga lakho lisisilinganiso sazo zonke iingxelo ezibhalwe ziindwendwe zakho.
Njengombuki zindwendwe, nawe uza kuba nethuba lokulinganisa izinga leendwendwe–lokucoceka, ububele noqhakamshelwano. Ingxelo yakho isinceda siqinisekise ukuba iindwendwe ziwaphatha ngokungathi ngawazo amakhaya ezihleli kuwo. Iindwendwe ezisoloko zinengxelo engekho ntle evela kubabuki zindwendwe zisenokohlwaywa.
Ukufumana ingxelo entle kwiindwendwe
Siqaphele ukuba ababuki zindwendwe abadla ngokunconywa ngabo bazikhathazayo ngezi zinto zintlanu: ukucoceka, izixhobo eziyimfuneko, iinkcukacha ezichanekileyo zendlu, ukungena ngaphandle kwamagingxi-gingxi, neendlela ezilula zokuqhakamshelana.
Iindwendwe ziza kulindela indawo ecocekileyo ebeziyibone kwiifoto zendlu yakho. Qinisekisa ukuba uzinika ixesha elaneleyo lokucoca ngaphambi kokuba kufike ezinye iindwendwe, ingakumbi xa ubhukwe kakhulu.
Iindwendwe ziza kuba nethuba lokulinganisa ukucoceka kwendawo yakho, kwaye izinga lokulinganiswa kwakho liza kubonakala kwiphepha elineenkcukacha zendlu yakho. Ukuba uhlala unezinga eliphantsi lokucoceka, usenokohlwaywa.
Coca onke amagumbi eendwendwe, ingakumbi amagumbi okulala, awokuhlambela kunye nekhitshi
Khangela ukuba akukho zinwele, uthuli, okanye ukungunda phantsi
Coca qho ngaphambi kokuba kungene ezinye iindwendwe:
Zibekele ilinen/amashiti neetawuli ezicocekileyo iindwendwe
Susa inkunkuma, ukutya, nezinto ezishiywe ziindwendwe zangaphambili
Shiya ixesha elaneleyo phakathi kwemibhukisho yakho ukuze ukwazi ukulungiselela iindwendwe ezilandelayo. Unokuyihlaziya imibhukisho yakho uze ushiye usuku okanye iintsuku ezimbini phambi kwemibhukisho
Ukuhlawula imali yokucoca uze enye uyisebenzisele izinto zokucoca okanye ukuqesha abantu bokucoca
Beka izinto zokucoca endlwini yakho ukuze iindwendwe zakho zikwazi ukucoca xa ziye zachitha into okanye zangcolisa ngengozi
Siphakamisa ukuba bonke ababuki zindwendwe babeke izinto ezinokusetyenziswa ziindwendwe ukuze zizifumane izinto ezizifunayo zize zibe nobusuku obumnandi.
Ubuncinane itawuli enye ngondwendwe olubhukishileyo
Ubuncinane makubekho umqamelo omnye wondendwe ngalunye olubhukishileyo
Ukuyichaza kakuhle into ezinokuyilindela iindwendwe zakho ngaphambi kohambo lwazo kwenza izinto zibe lula kuwe nakuzo. Unokubanceda abahambi babone ukuba indawo yakho ibalungele na ngokubanika inkcazelo ecacileyo neenkcukacha ezifana nokuba zivunyelwe na izilwanyana zasekhaya. Indlu eneenkcukacha ezicacileyo iyazitsala iindwendwe ezifuna indawo efana neyakho.
Iindwendwe ziza kuba nethuba lokuchaza ukuba ichaneke kangakanani inkcazelo oyinikeleyo.
Idilesi echanekileyo (iza kuvezwa kuphela emva kokuba undwendwe lubhukishile)
Iinkcukacha zegumbi lokulala nelokuhlambela zichanekile
Iifoto zendlu zibonisa imeko ekuyo kunye nendlela eme ngayo indawo yakho
Izinto zokusetyenziswa zinjengokuba zichaziwe, zikhona kwaye ziyasebenza
Sebenzisa iifotoezahlukahlukeneyo zezinga eliphakamileyo ezihamba nengcaciso ngazo, uze ubhaleinkcazelo ngendawo yakho
Faka Imithetho Yendlu echaza izinto ekubalulekileyo ukuba iindwendwe zakho zizazi. Imithetho yakho inokuzenza zicacelwe zizinto ezivumelekileyo nezingavumelekanga, njengokutshaya, izilwanyana zasekhaya, okanye ukuza nezinye iindwendwe.
Zazise iindwendwe xa kukho iinxalenye zendlu ezingamelanga zizisebenzise, njengegaraji okanye igumbi eliseluphahleni
Nyaniseka uzichaze izinto ezingalindelekanga ezinokuziphazamisa iindwendwe zakho. Iindwendwe zakho zifanele zaziswe xa ummelwane wakho eqalise iprojekthi yokwakha eza kubangela ingxolo okanye ukuba kuza kufuneka zinyuke ngezitepsi imigangatho eyi-8 ukuya kwindawo yakho.
Chaza zonke izinto ezinokusetyenziswa uze uqinisekise ukuba zonke zikhona kwaye ziyasebenza
IXABISO LOSUKU NGALUNYE
Qinisekisa ukuba indawo yakho ilifanele ixabiso olibekileyo. Ixabiso elixhomileyo linokwenza abahambi bacinge ukuba indawo yakho isemagqabini. Ufuna uncedo? Zama ukujonga ezinye izindlu kwindawo yakho okanye uvule Indlela Ephucukileyo Yokubeka Ixabiso.
Inkqubo ecacileyo nelula yokubhalisa xa ufika iya kuvuyelwa ziindwendwe zakho emva kokuchitha imini yonke zihamba. Iindwendwe ziya kucelwa xa ziza kuhamba ukuba zichaze ukuba bekunjani ukubhalisa kwazo ngokuya bezifika.
Bhala imiyalelo yokufika endlwini yakho–siza kwabelana neendwendwe zakho ngayo kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokufika kwazo ukuze yonke into ihambe kakuhle ekufikeni kwazo
Ukuba uceba ukudibana neendwendwe ubuso ngobuso, qinisekisa ukuba ulilungiselela kwangaphambili ixesha lokufika
Ukuba iindwendwe ziza kuzingenela, zifake ezo nkcukacha kwicandelo lendlu yakho elithi Izinto eziluncedo kwiindwendwe
Qinisekisa ukuba iindwendwe zakho ziyakwazi ukuqhakamshelana nawe ukuba zibambezelekile okanye zinombuzo
Nika iindwendwe zakho iinkcukacha ezicacileyo zokufika kwindawo yakho—ungonga ixesha ngokuzifaka zonke kwincwadi echaza ngendlu yakho
Ukuxhasa iindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo
Nokuba uhlala neendwendwe zakho okanye akuhlali nazo, kubalulekile ukuba usoloko ufumaneka ngexesha lokuhlala kwazo. Iindwendwe zakho ziza kuba nethuba lokuchaza izinga lakho lokuqhakamshelana nazo xa ziza kuhamba—kwaye liza kuvela kwiinkcukacha zendlu yakho.
Yiba neendlela ezilula zokuqhakamshelana ukuze iindwendwe zazi ukuba uyafumaneka. Qhakamshelana nazo kwangethuba ukuze nithethe ngamalungiselelo okufika kwazo. Ukuba awuzukubakho ukuze ubulise iindwendwe zakho xa zifika, ungazithumela umyalezo ngexesha lokufika kwazo ukuze uqinisekise ukuba yonke into ihambe kakuhle.
Ukuba uqinisekisa ukubhukisha kuze kubekho into etshintshileyo ngendlu yakho, xelela undwendwe lwakho kwangaphambili.
Khuphela i-app ka-Airbnb ukuze ukwazi ukuphendula imilayezo naphi na.
Ukuba awuzubakho kuloo ndawo ngexesha lokuhlala kwazo, unokuzinika indawo yasekuhlaleni ezinokuqhakamshelana nayo.